Budata Notin APK maka Android
Site na ngwa Notin, ị nwere ike tinye ndetu gị na ogwe ngosi na ngwaọrụ gam akporo gị.
Ọ bụrụ na ị nwere ọrụ dị mkpa ị ga-arụ, ịnwere ike iji ngwa ncheta na ekwentị gị iji dọọ gị aka na ntị nụbọchị na oge ịchọrọ. Ngwa Notin, nke na-enye ohere ime nke a site nịdetu ihe, pụtara ihe dị iche na ngwa idetu ihe yiri ya. Ngwa Notin, nke ị nwere ike ịtọ ka ihichapụ naanị mgbe ịchọrọ, site nịgbakwunye ọrụ ị gbakwunyere na ngwa ahụ na ogwe ngosi, na-enyere gị aka ịghara ichefu ọrụ gị ọ bụla.
Nime ngwa Notin, nke na-enye interface dị mfe iji, ị nwere ike ịdeba naanị ihe ndị ịchọrọ icheta ma tinye ha na ngosi ngosi. Ngwa Notin, nke na-enye ọmarịcha imewe na-egbo mkpa gị, enweghị atụmatụ na-adịghị mkpa na mgbagwoju anya, ya mere ọ na-ewe obere ohere na ekwentị gị na ị gaghị enwe nsogbu ọ bụla noge ojiji. Ọ bụrụ nịchọrọ inwe ihe ndị ịchọrọ icheta nihu anya gị mgbe niile site na ịgbakwunye ha na ogwe ngosi, ịnwere ike ibudata ngwa Notin nefu.
Mmepụta: Lazy Ninja